Intee Hooyo Soomaaliyeed bey Arintaan ku dhacday? - Sheeko laga Naxo! | KEYDMEDIA ONLINE
Intee Hooyo Soomaaliyeed bey Arintaan ku dhacday? - Sheeko laga Naxo!
Maxamed Xusein - Xoolihii waa ba'een, Dhulkii waa angagay, samadii waxeey la ooysay Dhimashadii badneyd ... ABAAR, ABAAR, ABAAR ... Aamina waa Hooyo Somaliyeed, waxeey ka hadleysaa Qiso Naxdin iyo Murug badan oo soo gaartay ...
Waxaan ku barbaaray Tuulo Somaliyeed oo aad u Qurux badaneyd, Qosolka Caruurta iyo soo noqoshada Xoolaheena Casarkii Rajo weyn ayaan laheyn.
Kadib Dagaal ayaa bilaawday, dagaalkaas oo galaaftay Nolosha noola badan, dagaalka waxaa sii kaalmeyay Abaar.
Roob nooma da'in dhowr Sano ilaa aan gaarno her aan ilowno Caraftii uu lahaa Roobka, Ceelashii way gureen ... Biyo malahan meel loo doono.
Dad ayaa ii sheegay in Kooofur Ceelal Biyo ku yaalaan, alaabteydii ayaan xirxirtay, waxaa go'aan ku gaaray in aan badbaad u raadiyo Caruurteyda Sadexda ah.
Waxaan macsalaameeyay Hooyadeey oo aan fileyn in aan Dib dambe u sii arki doono, waxeeyna Illaahey nooga barisay meel wanaagsan, maalmo ayeey Qaadneysaa ilaa aan ka gaarno meshaas, Qoraxdu Naxariis malahan oo wey kulushahay.
Waxaan bilaabay Socodkii dheeraa, Qoraxduna aad ayeey u kulushahay, Casirkii ayaan cabnay Kistii yareed Biyaha noo Hartay.
Gabadheydii wey socon weysay waxaa soo xumbaaray Wiil-keeyga Yuusuf oo 2 Sano ka weynaa.
Markii gabalku dumay Gabadheydii wey dhimatay... Waxaan ku aqriyay Faataxo, meel cidlo ah ayaan uga soo tagay, 2 Qori ayaan dusha ka saaray, haadunah (Shimbiraha Meedka cuna) Geedaha ayeey dul saarnaayeen, waan Aasi kari waayay Raxmo ... Gabadhey Raxmo waan Aasi kari waayay...
Malaheyn dareen, oo waxaa dhintay Qalbigeyga!
Waxaa i Garab socday Wiilkeeyga Yuusuf oo isna aad u daciifay, waxaa ka baqaayay in uu asiganah iga dhinto. Markaan arkay anii socon waayay waxaan la fariistay Qoraxda kulul, waan u Heesay oo waxaan ka tirtirayay Carada iyo Busta Wajiga ka saaran nasiib daro. Wuu dhintay Wiilkeygii Yuusuf ... Alaa Qadaray ...
Waxaa u balan qaaday in aan ka tagin laakiin asigaa iga tagay. Qof walbo wuu dhimanayaa ...
Waa sii watay Socodki, waxaan ogaaday Cunuga Yar (11 Bilood) ee aan Dusha ku wato in uusan Biyo la'aan sii noolaaneyn, lakiin nasiib daro Biyo malahan. Waxaan socday Maalmo xitaa ma aqaan Tiradooda.
Waxaan helay Aqal yar oo ay ku jirto islaan waayeel ah oo ayadane Ilmaheedii Abaarta ku weysay cid ay kaalmeyso iska daayee ayda kaalmo u baahan, waxaa uga tagay Cunugeygii ii haray si aan Biyo ugu soo raadiyo, waan baxay waxaan sii maqlaayay Aadaarka Cunugeyga...
Biyo ma soo helin, Maalintii kale ayaan soo laabtay wax tabar ah iima harin ... AAWAY WIILKEEYGII ... Shalay ayuu Dhintay ayaa leeygu Jawaabay. Ala maxaan uga tagay, ala maxaan u sameyay haduu kii iigu danbeyay Korkeyga ku dhiman lahaa ...
Caruurteyda waxeey Dhinten anoo Biyo u raadinaayo ...
Inaa lilaah Wa'inaa Ileeyhi Raajicuun!